Qaraxu ma sii soconayaa haddaan la baddelin Wasiirka Amniga? | KEYDMEDIA ONLINE
Qaraxu ma sii soconayaa haddaan la baddelin Wasiirka Amniga?
Shaqsiga Farmaajo ugu magacaaban, Guddoomiye ku xigeynka Amniga iyo Siyaasadda Gobolka Banaadir, ayaa xaqiijiyay in Kooxda Fahad hoggaamiyo ay qaraxyada sii wadi doonaan inta kalsoonida lagala laabanayo Wasiirka Amniga.
MUQDISHO, Soomaaliya – In ka badan kun qof oo ka mid ah shacabka Soomaaliyeed, una badan dhallinyarada aqoon-yahannada ah ee ku sagan gudaha dalka iyo dibaddaba, ayaa si weyn kaga falceliyay, hadal uu bartiisa Facebook ku soo qoray madaxa abuubulka bannaan-baxaasha Farmaajo, isla-markaana lagu naas-nuujiyay xilka Guddoomiye ku xigeynka Amniga iyo Siyaasadda Gobolka Banaadir Cali Yare Cali.
Cali, wuxuu qoraalkiisa si maldahan ugu sheegay in qaraxyada dalka ay iyagu ka danbeeyaan, siina wadi doonaan inta Wasiirka Amniga Cabdullahi Maxamed Nuur, laga qaadayo xilka, taas oo sababtay in dhamaan faallooyinkii laga baxshay qoraalkiisa loogu sheego in ay joojiyaan dhiigga shacabka oo ay ku qubeysanayaan. Qoraalka hadal heynta dhaliyay ayaa ah labada Paragraph ee hoose.
Labo (2) Sano ka hor ayaa u danbeysay in 3 maalmood oo isku xigta oo uu qarax ka dhaco Muqdisho, waxaan codsaneynaa inaan Amniga Gobolka Banaadir la ganacsiyeeyn lana siyaasadeeyn, oo waxkasta laga hormariyo badqabka dadka iyo hantidooda.
Madaxweynaha iyo Ra'salwasaarihiisa waxaan ka codsaneynaa in ay si degdeg ah u soo magacaabaan Wasiir Amni oo ay isku waafaqsanyihiin ahna qof bulshada ka gadmi kara, lana shaqeyn kara dadka iyo Amniga qeybihiisa kala duwan.
Dadka ka falceliyay, waxa ay tilmaameen in qoraalku caddeyn u yahay in qaraxyada ay masul ka yihiin kooxda waqtigu ka dhamaaday ee eeduhu dul-hoganayaan, isla-markaana ay go’aansadeen in ay dhiigga shaabka ku gorgortamaan.
Dadku waxa ay qaraxyada iyo qoraalkaba ku turjumeen falsafadda ah (Hegelian dialectic) oo ah in dhacdo la abuuro si dhacdo kale looga dhabeeyo, taas oo u jeedku yahay in Qaraxyadu sii socdaan si xilka looga qaado Wasiirka Amniga, oo Kooxda Farmaajo cabsi xooggan ka qabaan.
Hoos ka aqriso qeyb ka mid ah falcelintii shacabka.
Farhan Ali Halane : “Cali Yare Cali qoraalkaadan waa mid dambi weeyn aad ku geli karto kafiirso waxaad qoreeyso.Ehelada dadkii ku dhintay qaraxaan waxay refrence ahaan u qaadan karaan qoraalkada oo u eg hadaan Wasiirka amniga la bedelin qaraxu waa sii soconayaa sida inaad adigu fulineyso qaraxa” !!!!!
Haweya Ismail Ahmed: “Idinkaa qarxiyay miyaa ileyn si aad amniga qalqal ugalisaan walee ikraan bis lama dilinee wixi larabaa la iska dili jiray si dadka loo marin habaabiyo”
Macruuf Xaaji: “Waxaan u fahannay sababta wax loo qarxinaayo in ay tahay in wasiir Amni oo la isku waafaqsanyahay la soo magacaabo sida aad sheegtay”!
Moha Duceysane: “Si wasiirka loo eedeyo kalsonidana logala laabto inaad wax qarxisaan sidii Shabaabka miyaad mareysan? ama shabab laso heshisan qarax uso dhibtan si lo dhaho wasiirki amanka aya ku fashilmay shaqadisa? Warkaga ayaa sidas u dha-dhamaya waxana tihiin koox cadaw ah oo an kursi mahane dal iyo dad midna ka fakarin, Cuqdada kooxdina heysa badanaa?”
Ahmed Omar: “Caliyoow dhiigga dadkaaga ha siyaasadeyn. Ugu yaraan ka aamus. Aakhiro iyo adduun kala badane”
Mohamud Auale: “Afar maalin ayuu Xamar jooga Eedeysane Fahad sadax maalin oo kamid ah qarax ayaaa dhacay”.
Mohamed Qoorsuul: Qofkasto indheer garad ah, aqriyo bostigaaga waxuu KA dhadhami karaa qoraalkaaga Inuu ahaay qaraxii maanta mid siyaasadeed balse waxaa ogaata cali faaruqow dadka meesha ku dhamaanaayo waa dadkaagii waa ahalkaagii waa dhiigaagii Rabitaan shaqsi yuusan kaala waynaan dhiigaas maatada ee, qubanaayo Rabi hortiisa Maxaa su,aalo Qarsoon yaala ?”